Akon’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana – 2006 · Global Voices teny Malagasy
Akon'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana – 2006
Voadika ny 24 Novambra 2018 5:41 GMT
Natao tamin'ny alatsinainy lasa teo tao amin'ny toeram-pisotroana kafe/toeram-pisakafoanana Latina ny fihaonan'ny bilaogera Toniziana faha-11. Tsara ny fandraisana anjara tamin'ity fihaonana ity izay nahitana olona 18. Ny fihaonana manaraka dia tokony hatao any amin'ny tendrombohitr'i Zaghouan. Maro amin'ireo bilaogera ankehitriny no nanoratra momba ity fihaonana ity (Tom (FR), Marouen (FR), Karim (EN), MMM (EN), Staka (FR), Mochekes (FR), Foufa (FR)).
Fandraketana mozika Toniziana, Tunizika namoaka fizarana endrika mozika vaovao Maraokana miaraka amin'ny mozika avy amin'ireo mpanakanto: Ahmed Soultan, Darga, Casa Crew ary Hoba Hoba.
Maro ny resadresaka momba ny fanolorana aterineto finday vaovao an'ny Tunisiana, manomboka amin'ny Marouen (EN) izay nanambara izany talohan'ny nampahafantarana ny tolotra ho an'ny daholobe, hatramin'i Keitaro (FR) mampiasa izany, ary i Mochekes (FR) manome torohevitra momba izany.
Yamen sy MMM naka ny vaovao momba ny antoko politika vaovao izay teraka tany Tonizia tamin'ny zoma 3 marsa. Ny antoko vaovao, antsoina hoe “Antoko Maitso ho an'ny Fandrosoana” no antoko faha-sivy ara-dalàna ao Tonizia.
Tom manoratra ny hoe taorian'ny usenet, pejy fandraisana manokana, fifanakalozan-dresaka, efitra fikarajiana (chatrooms), bilaogy sy tontolon'ny bilaogy, dia manomboka maka endrika ny zavatra vaovao: ny sehatra fanehoan-kevitra, izay ahitana olona maneho hevitra be amin'ny bilaogin'ny hafa saingy tsy manana bilaogy manokana.
Le Kerkenien sy Swobodin samy mitondra ny lohahevitra fanavakavaham-bolonkoditra sy ny hoe hatraiza ny fandeferan'ny vahoaka Toniziana amin'ireo Afrikana mainty hoditra izay tonga miasa na mianatra any Tonizia.
Tarek kosa manoratra momba ny fampisehoana hitany tao amin'ny fahitalavitra Toniziana indray mandeha miompana amin'ny vehivavy tambanivohitra mahantra nivelona tamin'ny fiompiana ondry roa, ary nampiasa vola kely azony indray tamin'ny fividianana ondry hafa, sy ny fomba nahafahany nanamboatra sy nandravaka ny trano keliny tamin'ity fidiram-bola ity.
Noresahan'i Tarek ny hambompon'ilay vehivavy amin'ny fahitana ny fiainany sy ny fahavelomany, ​​ary mino izy fa manomboka amin'ny olona tahaka izany ny Fampandrosoana Maharitra, olona tsy mijanona sy miandry tolorana na ampiana, olona miasa sy mino ny tenany sy ny hoavy tsaratsara kokoa.
Navoaka tao amin'ny bilaogy Toniziana El Khadra Environmental Blog amin'ny teny Anglisy sy Frantsay ihany koa ny lahatsorany .
Rim indray miantso ireo vehivavy Toniziana liana handray anjara amin'ny “Fifanakalozan'ny tanora momba ny finoana ho an'ny Fanasitranana ara-tontolo iainana sy ara-kolontsaina iombonana”, izay tetikasa iombonana ao amin'ny Ivotoerana momba ny Fianarana tontolo iainana ao Sipra sy Finiavana Fivavahana Tafaray, izay natao tao Sipra nanomboka ny 5 ka hatramin'ny 12 jona.
MMM manoratra momba ny Pr. Habiba Bouhamed Chaabouni avy any Tonizia, izay nahazo ny loka Oréal-UNESCO Vehivavy ao amin'ny Siansa noho ny fandraisany anjara tamin'ny fanadihadiana sy fisorohana ny fikorontanan-tsaina manaranaka.